အကောင်းဆုံး သကြားအိတ်များ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး သကြားအိတ်များ ကိုရှာဖွေရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ (သို့) PP ယက်ထည်များနှင့်အိတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Taiwan။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လာစေမည့်ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော PP ယက်အိတ်များကိုထုတ်လုပ်ရာ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဇွဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးဆုံးရေရှည်သကြားထုတ်လုပ်သူဖြစ်သော Tai Sugar ကော်ပိုရေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာရှည်ခံဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ရှိသည် သကြားအိတ်များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ PP နှင့် PE အပါအ ၀ င်ထည်များနှင့်အိတ်များအပါအ ၀ င်
အမြောက်အများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအာမခံချက်အတိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အိတ်များကိုသင်၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းအတာ၊ သိပ်သည်းဆ၊ အရောင်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအရစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
သင့်လျှောက်လွှာအတွက်သင့်တော်သောထုပ်ပိုးခြင်းအကြံဥာဏ်များကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီပါ။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဒီနေ့
ပုံစံ - F-SERIES-03
Strip count က:15 အတိုင်*၁၅ ရက်
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်:၁၄၅ ဂ&ကျော်သူ;အိတ်နှုန်း 5g
Print layout ကိုရေးပါ:လိုအပ်ချက်မှစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
ပေးပို့ခဲအချိန်:ပထမ ဦး ဆုံးကွန်တိန်နာ 30-အမိန့်အတည်ပြုချက်အပျေါမှာ 60days
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သော PP ယက်ထည်သကြားအိတ်များနှင့်အခြား PP ထုတ်လုပ်မှုကိုအထူးပြုသည်/PE ထုတ်ကုန်များ.သင်၏လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်အတွက်သတ်မှတ်ချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်,မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ရန်စူးစမ်းလေ့လာရန်ယခုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/sugar-bags.html
အကောင်းဆုံး သကြားအိတ်များ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် သကြားအိတ်များ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ